Wasiir Cukuse Oo Su’aalo Laga Wadiiyay Socdaalka Madaxweyne Siilaanyo Ee Ireland iyo Kulankii Labada Madaxweyne |
Wasiir Cukuse Oo Su’aalo Laga Wadiiyay Socdaalka Madaxweyne Siilaanyo Ee Ireland iyo Kulankii Labada Madaxweyne
Dublin(GNN)Wasiirka warfaafinta Somaliland Cabdillaahi Maxamed Daahir Cukuse, oo ka mid ah weftiga madaxweyne Siilaanyo ee shalay la kulmay madaxweynaha Ireland ayaa BBC-da xog waran ka siiyay arrimaha ay Ireland kala hadlayaan.
Ugu horayn waxa uu wasiir cukuse ka hadlay ujeedka socdaalka waxaanu yidhi “Wadanka Ireland waxa uu ka mid yahay wadamada Caalamka ee muhiimka u ah in aanu gaadhsiino qaddiyadda Jamhuuriyada Somaliland iyo Baahida aanu u qabno nooca xidhiidhka aanu caalamka la leenahay.
sidaa awgeed waxa aanu jeclaysanay in ay Ireland ku soo biirto wadamada gacanta weyn ka geysta dhismaha qaran-nimada Jamhuuriyada Somaliland, dhaqaalaha Arrimaha Dibeda, Siyaasada iyo wixii la mida. waa wadan weyn oo caalamka ka mid ah waxa aanu markaa ka wada hadalayna danaha labada dal.”
Su’aal: BBC, Markaa waxa aad Ireland waydiisateen haatan maxay yihiin? oo aad doonaysaan inay ka qabtaan Somaliland?
J: Cukuse, “waxa aanu marka hore waydiisanaynay oo aanu kala hadlaynay waa aqoonsiga Jamhuuriyada Somaliland oo dalkayagu baahi weyn u qabo in ay beesha caalamka ka mid noqoto dawladaha ay dunidu aqoonsan tahay oo dal iyo dunidaba guud ahaan waanu waydiisanaa, waana dedaalka ugu horeeya ee xukuumadayadu ku hawlan tahay markaa waanu waydiisanay taas.
ta labaadna waxa aanu waydiisanay arrimaha kale ee dhinaca dhaqaalaha, waxa jira wadamo fara badan oo dhawr ah, dawlada Ingiriiskuna hogaaminayso, oo Norway ka mid tahay oo sanduuqa dhaqaalaha ee horumarinta Jamhuuriyada Somaliland sanduuqa la yidhaahdo oo ay dawladuhu toos ugu shubaan deeqaha ay dalkayaga siinayaan in ay Irelandna ku soo biirto, waanu waydiisanay.
waxa kale oo saddexaad oo aanu ka wada hadalnay inay qayb ka qaadato sidii ay nooga caawin lahaayeen dhinaca aqoonta, qalabka iyo dhismahaba in dhinaca amniga uu dalku u baahan yahay oo ay kaalin ka qaadan lahayd, waayo dadka aanu qaabilnay ka mid ayuu ahaa taliyaha guud ee ciidamadu madaxweynaha Ireland ayuuna ku wehelinaayey kulanka.”
S: Mudane Wasiir hadii aan ku hormaro qodobka koowaad ee aad ka dhawaajisay ee ah in dawlada Ireland idin aqoonsato, maxay idin yidhaahdeen, markaad ula tagteen arrinkaasi?
J: Cukuse, “Markaanu aqoonsiga waydiisanay madaxweynaha dawladan Ireland wuxuu qiray inay Somaliland tahay dal ka soo kabtay burbur iyo dagaaladii sokeeye ee qabsaday, wuxuu qiray inuu yahay dal iyo ummad waxqabsaday in aanu nahay, wuxuu qiray in aanu xaq u leenahay in lana caawiyo oo gacan lanaga siiyo baahida faraha badan ee aanu u qabno taageerada dunida, waxaanu sheegay in uu dalkiisu dib u eegayo arrintaa.”
S: “Arrimaha aad haatan ka dhawaajiseen ee aad ula tagteen dawlada Ireland sow maaha kuwii aad horeba ula tagteen dawladaha hore oo aad aqoonsiga waydiisanayseen? Markaa maxay soo kordhinaysaa?
J: Cukuse, “walaal dawladahaa waanu ula tagnay waanay soo kordhinaysaa annaga waajib nafura weeyaan in aanu dal kasta oo dunida ku yaalaba aanu aqoonsiga waydiisano, dunidana waa waajib in ay garawsato waxaa ay qirayso oo waanu ka filaynaa in maalin maalmaha ka mid ah ay qiridoonaan, markaa waxay Ireland ka mid tahay wadamada aanu rajada ka qabno in ay mar uun aqoonsato Jamhuuriyada Somaliland.”
S: “waxa aad sheegtay in aad doonaysaan dalkan aad booqateen in ay idinka caawiyaan dhinaca waxbarashada iyo qalabka, markaa waxaad idinku waydiisateen mooyaane maxay iyagu idin waydiisteen?
J: Cukuse, waxa ay Ireland na waydiisatay waxa sida caadigaaba ay dunida oo dhami na waydiisato oo ah in ay Jamhuuriyada Somaliland dunida kala shaqayso Amniga badaha iyo beriga labadaba, amaanka iyo nabad kuwada noolaanshaha dunida caalamka iyo beesha caalamkaba.”